XPS sheet extrusion mutsara - China XPS sheet extrusion line mutengesi, Factory -Jwell
Iyo ine yakavharwa-yakavharika-sero huchi hwehuchi uye parizvino inozivikanwa seye thermal kuputira zvinhu. Izvo zvinoenderana nekudzoreredza kweEPS polystyrene board granules seyakanyanya mbishi zvinhu. Icho chigadzirwa chinogadzirwa ne extrusion, dhayeti, kudhirowa uye kucheka. Kuwanda, kutorwa kwemvura, kudziya kwemafuta uye kupisa kwemhepo kwakadzika pane mamwe marudzi. Iyo ndiro-yakaumbirwa kuputira zvinhu ine hunhu hwesimba rakanaka, huremu hwakareruka, kusagadzikana kwemhepo, ngura kuramba, anti-kukwegura, mutengo wakaderera, nezvimwewo, uye inoshandiswa zvakanyanya mudenga kuputira masisitimu; masvingo echando ekuchengetera, dzimba, matura ezviyo uye zvivakwa zvevanhu Thermal kuputira; kuvakwa kwepasi kwenzvimbo dzinomhanya nendege, mapaza; mabasa eruzhinji emigwagwa uye njanji; kugovera masisitimu ezvivakwa, zvivakwa zvehofisi, mafekitori, nezvimwe.
XPS michina ine maviri marudzi eimwe-sikuruu akateedzana muchina wekusvina muchina uye iwoyo-nongedzo kaviri-akateedzana imwe-sikuru inosvina muchina. Iwo maratidziro ndeaya: Φ135 /Φ
150 single screw extrusion ft muchina akateedzana uye Φ75 /Φ150 yakafanana nhungamiro yakapetwa kaviri akateedzana sikuruu extrusion ft muchina. Iwo-anotenderera mapatya-sikuru kusvina muchina unogona kugadzirisa zvigadzirwa zvine zvakawanda zvezvinhu nekuda kwekugona kwazvo kusanganisa kushanda.
Iyo ichangoburwa CO2 kupupira furo yeyuniti yeJwell inoshandisa CO2 pachinzvimbo cheFreon nebutane kuburitsa XPS yakadzoserwa bhodhi, inova yakasvibirira uye inochengetedza zvakatipoteredza uye yakaderera mumutengo.
M200m3 / zuva
M300m3 / zuva